नयाँ तथ्यः तपाईकै गल्तीले बढिरहेछ भुँडी::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानः मोटोपनि अहिलेको अधिकांशको समस्या हो । के तपाइँकोपनि भुँडी बढिरहेको छ ? अझ विभिन्न कोशिस गर्दा पनि भुँडी घटिरहेक छैन ? खाना घटाउँदा पनि मोटोपन घटेको छैन ? यदि यी प्रश्नको जवाफ ‘हो’ मा आउँछ भने तपाईले केही गल्ती गरिरहनुभएको छ । हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने ४ कारणले हाम्रो मोटोपन र भुँडी नघट्ने तथ्य पत्ता लागेको छ ।
जसले डाइटिङको माध्यमबाट शरीरको तौल घटाउन खोजिरहेको हुन्छ उसले जीवनशैलीमा ध्यान निदिँदा उल्टै वजन बढाउँछन् । खासगरी डाइटिङका नाममा भोकै बस्ने र कुनै बेला अनियमित तरिकाले धेरै खाने भयो भने शरीरमा वजन वृद्धी हुन्छ ।
बीपी प्रतिष्ठान पढ्ने २६ वर्षीय विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि, निधन भएका वृद्धको रिपोर्ट नेगेटिभ
प्रदेश १ मा ४३ जना नयाँ संक्रमित थपिए
झापामा पनि कोरोनाको उपचार, चार जिल्लालाई सहज हुने